Waa Danbiilihii Amray In Ninkayga La Dilay Ee Lacagtiisu Ayayna Idin Qaadin-Xaaskii Jamal Khashoggi Oo Newcastle Warqad U Qortay. - Gool24.Net
Waa Danbiilihii Amray In Ninkayga La Dilay Ee Lacagtiisu Ayayna Idin Qaadin-Xaaskii Jamal Khashoggi Oo Newcastle Warqad U Qortay.
Xaaska wariyihii sida arxandarada ah hibihiisa loo jar jaray ee Jamal Khashoggi ayaa warqad furan oo qiiro leh u qortay maamulka kooxda Newcastle United si ay boqorka Sacuudiga ee Mohammed Bin Salman uga hor joogsato in uu kooxdan ku iibsado aduun dhan 300 milyan gini.
Mohammed Bin Salman ayaa bilihii ugu danbeeyay ku hawlanaa in uu kooxda Newcastle United ku iibsado lacag 300 milyan gini ah laakiin xaaska wariyihii boqortooyada Saudi Arabia lagu eedeeyay dilkiisa ee Jamal Khashoggi ayaa laf dhuun gashay ku noqotay.
Fariin quluubta gilgishay ayay gabadhii u cindanayd Jamal Khashoggi ay u qortay kooxda Newcastle United waana warqad saamayn badan yeelan karta.
Dawlada UK iyo maamuulka Premier league ayaa si joogto ah loogu baaqayay in ayna aqbalin dalabka Mohamed Bin Salman ee Newcastle United halka kooxaha Premier League ay ka soo horjeedsadeen in maal qabeenada reer Saudi Arabia ay lacag badan kula wareegaan Newcastle United.
Haddaba inkasta oo ay warqad dheer soo qortay xaaskii Jamal Khashoggi waxaanu halkan idiinku soo koobaynaa waxyaabihii ay warqadan ku soo qortay iyada oo warqada oo dhan aad qoraalkeeda halkan ka arki karto.
Xaaskii uu Wariye Jamal Khashoggi la aqal gali lahaa maalmo ka kadib dilkiisii ayaa warqada ay maamulka Newcastle United u qortay si toos ah ugu hagaajisay taageerayaasha kooxda waxay ciwaan uga dhigtay: “Waa warqad furan oo ku socota taageerayaasha kooxda kubbada cagta ee Newcastle United”.
Waxayna qoraalka ku bilawday: “Waxaan ahay Hatice Cengiz, waa gacalisadii marxuum Jamal Khashoggi. Jamal waxaa October 2, 2018, lagu dilay safaarada Saudi Arabia ee Istanbul ee duruuf argagax leh markaas oo aan anigu banaanka ku sugayay si uu iigu soo laabto. Waxaanu qorshaynaynay in aanu dhawr maalmood kadib is guursano”.
Hatice Cengiz oo qoraalkeeda sii wadata ayaa tidhi: “Waxaan idiin soo qorayaa waqti aad muhiim ugu ah taariikhda kooxdiina kubbada cagta ee caanka ah. Boqor Mohamed Bin Salan waa hogaamiyaha dhamayska tiran ee Saudi Arabai wuxuuna doonayaa in uu kooxdiina kula wareego dalab lacag badan ah”.
“Waxaan ogahay in intiina badan ay idin qaadanayo dalabkiisu si aad kooxdiina uga saartaan rabitaanka xaalada curyaaminta ah ee ay sanadada ku soo jirtay. Laakiin boqorka waxaa lagu eedeeyay in uu amray dilkii Jamal. Dhamaan baadhitaanadii lagu kalsoonaaday waxay muujiyeen masuuliyadiisa. Isaga dalkiisa laguma maxkamadayn, maadaama oo uu ku maamulo gacantiisa birta ah”.
Inkasta oo ay warqadu aad u dheer tahay waxay xaaskii Jamal Khashoggi ay maamulka iyo taageerayaasha kooxda Newcastle United ay ka bariday in ay codsigeeda tixgaliyaan oo ayna dalabka Bin Salman aqbalin.
Hatice Cengiz ayaa Mohamed Bin Salman iyo maamulka boqortooyada Saudi Arabia ku eedaysay in ay gaysteen gabood falyo badan oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha waxayna xustay in ay jiraan dad badan oo ay jidh dil ama kharajin ku sameeyeen.
Halkan kaga bogo warqada qiirada leh oo dhamaystiran.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa waxa uu noqon doonto falcelinta taageerayaasha kooxda Newcastle United iyo maamulka kooxdoodu iyada oo Mohamed Bin Salman uu dhibaato kale sii wajahayo.